रोमी र सविना को मामला मीडिया कहानियों मा अटक छ र असंभव "साक्ष्य" मा मार्टिन विजल्याण्ड
यो रोमी र सविनाह को समानांतर-हत्याको उल्लेखनीय कथा बनी रहेको छ। निस्सन्देह, हामी अब रोमीको हत्याको बारेमा केही सुन्न सक्दैनौ। सबै पछि, यो "हल" छ। सतावार्ताले जान्दछ। एक 14 वर्षे केटाले रोमीलाई दुर्व्यवहार गरी हत्या गरेका छन्। उहाँले कसरी यी चमत्कारपूर्ण कामहरू उल्लेख गर्नुभएको छैन र यो उल्लेख भएमा, यो मिडियामा एक कथा भन्दा बढी हुनेछैन। हामी यसलाई प्रमाणित गर्न सक्दैनौं। मा Anass Aouragh मामला, हामीले सार्वजनिक डोमेनमा अर्को फोटो देख्यौं, जसबाट हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं कि केही चोटहरू थिए। तथापि, घोडाहरू एनएफआई प्रतिवेदन (डच फ्रान्सेन्सी इन्स्टीट्यूट) मा वर्णनको साथ पूर्ण रूपमा असंगत देखिन्छ र पिताले पनि रिपोर्ट गरे कि रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको धेरै अधिक चोटहरू छन्। त्यो एनएफआई "प्रमाण" झूटो निर्माण भएको जस्तो देखिन्छ। आजको हत्याको घटनामा हामीले कुनै प्रमाण देख्दैनौ तर हाम्रा सबूतहरू भनिएको छ। यसरी, सावनाहको हत्याको अपराधीको प्रमाण उनीहरूको सोशल मिडिया च्याट र सुरक्षा क्यामेरा तस्बिरहरूमा भेट्न सकिन्छ। RTL को समयरेखामा हामी यो "विस्तृत पुनर्निर्माण"(यहाँ हेर्नुहोस् भिडियो रिपोर्ट)। शब्दहरूको यो छनौट आफैमा पहिले नै भन्छ: यो पुनर्निर्माण हो। आखिर, पुनर्निर्माणको शाब्दिक अर्थ 'पुनर्निर्माण वा सुधारिएको के हो'।
RTL मा त्यो समयरेखा (त्यो एस मामला पछि एक वर्ष Machiavelli मूल्य जीता) एक भ्रमणको लायक छ। कथित अपराधी (सम्भवतः एन्जेलो सोर्स Giroto) मुख्य रूप देखि सावनाह संग संचार मा Instagram प्रयोग गर्नेछन्। त्यो पनि सुरक्षा क्यामेरा तस्बिरहरूमा देखा पर्न सक्छ। यहाँ देखाइएको तस्विर पूर्णतया अर्थहीन छ, किनकि बाइकमा व्यक्ति पूर्णतया ब्लुड गरिएको छ। हामी एक कथा फेरि सुन्नेछौं हामी प्रमाणको कुनै पनि प्रमाणको लागि कुनै प्रमाण छैनौँ। यसको प्रसारण पनि शुक्रवार 30 जुन Jinek बाट यो भनिएको छ कि संदिग्ध र सवनाह एक सुरक्षा क्यामेरा मा एक साथ देख्यो। यी चित्रहरु लाई पनि ब्लीड गरियो। चलो बस लिनुहोस् र टाइमलाइन यहाँ अध्ययन गर्नुहोस्:
बिहीबार 1 जून
12.00 घण्टाको बारेमा: Savannah एक भौतिकी और रसायन शास्त्र वर्ग के बाद Bunschoten में Oostwende कॉलेज में। एक सहपाठीको अनुसार, सावनाह गोप्य रूपमा भिडियोसँग संदिग्ध कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ।
12.15 घण्टा: पाठ पछि सवनाह बिरामीको नोट हुन्छ। उनी भन्छिन् कि उनी आफ्नो हर्नियाबाट पीडित छन्।
12.52 घण्टा: संदिग्ध Amersfoort स्टेशनमा लेनदेन गर्दैछ।
13.20 घण्टा: संदिग्ध सावनालाई इन्स्टाग्राम मार्फत थाहा छ जुन उनी हरेक क्षण छोड्छन्। बोनसस्टोन-स्पेकगेबर्गको दिशामा उहाँले एम्र्सफोर्ट स्टेशनमा बस 76 लिनुहुन्छ।
13.45 घण्टाको बारेमा: Savannah घरबाट छोड्छ। उनी भन्छिन् कि उनी घर असारमा स्कूल असाइनमेन्टमा काम गर्न जाँदैछन्।
13.58 घण्टा: सावनाहले इन्स्टाग्रामको माध्यमबाट संदिग्ध पठाउँछन् कि त्यो उनीसँग छ निलो हेरान है (एक बस स्टप संग एक सडक, 300 मीटर को उनको घर देखि)। संदिग्धले संकेत गर्दछ कि त्यो कलममा छ।
बस आश्रय जहाँ सावनाह र संदिग्ध भेटियो।
13.58 घण्टा: सावन र संदिग्ध बीच टेलिफोन सम्पर्क। कुराकानीले शून्य सेकेन्ड लिन्छ।
14.12 घण्टा: सावनाह र संदिग्ध कम्पनीहरूबाट धेरै सुरक्षा क्यामेराहरु द्वारा फिल्माईएको छ ट्विस्टहरू.
14.16 घण्टा: सावनाह र संदिग्ध ठेगाना ठेगाना एड क्रोनकेल्स 23 मा खाडी ग्याँस स्टेशन मा मुलायम पेय को खरीद गर्दछ। सावनाहले उनको 1,50 यूरोको खरीद गरेका छन्। संदिग्ध आफैले नगद भुक्तानीमा भुक्तानी गर्दछ।
14.23 घण्टा: संदिग्ध साथीलाई तत्काल सन्देश पठाउँदछ। उनी भन्छन्: 'हे'।
14.32 घण्टा: संदिग्धले आफ्नो फोनमा सामग्रीको साथ नोट बनाउँछ: '...' (चारवटा थोप्लाहरू / बिट्सहरू)।
14.48 घण्टा: यदि उसले आउँछ भने सातानले मित्रलाई सन्देश पठाउँछन्। संदिग्धले त्यही मित्रलाई पनि सन्देश पठाउँदछ।
14.49 घण्टा: सावनको जीवनको अन्तिम चिन्ह; त्यतिबेला त्यो अन्तिम समयको लागि अनलाइन छ।
15.11 घण्टा: प्रेमिकाले संदिग्ध जवाफ दिन्छ: 'हो'। अनि त्यसपछि पठाउँदछ: '?'
15.23 घण्टा: एक महिला महिला बाइक मा एक सामने एक क्रेट संग व्यक्ति कम्पनी को सुरक्षा क्यामेरा द्वारा फिल्माईएको छ। प्रहरीले सोवान्नाबाट बाइकमा यो संदिग्ध मानिन्छ। संदिग्ध भन्छन् कि छवियों धेरै अस्पष्ट छन् र भन्छन् कि उसले आफैले पहिचान गर्दैन।
15.24 घण्टा: फेरि एक महिला एक क्रिकेट मा बाइक संग बाइक अगाडि फिलिम गरिएको छ भोल्टावेग 30। यो एक क्यामेरा क्यामेरा द्वारा गरिन्छ। यहाँ, पनि, पुलिसले यो संदिग्ध चिन्ता सोच्छ। संदिग्ध भन्छन् कि छवियों धेरै अस्पष्ट छन् र भन्छन् कि उसले आफैले पहिचान गर्दैन।
15.25 घण्टा: महिलाहरु संग बाइक बाइक र क्रिकेट एक केटा मा फिल्माईएको छ Edisonweg। उहाँले सडकमा आधा बाटोलाई घुमाउनुहुन्छ। केटाले कोट लुकाउँदैन, तर बाइकमा क्रिकेटमा एक ब्याकप्याक राखेको छ। संदिग्ध आफैलाई यो चित्रमा पहिचान गर्दैन।
प्रहरीले यो संदेह छ कि यस फोटोमा व्यक्ति सानानाबाट महिला बाइकमा संदिग्ध छ। (फोटो: आरटीएल समाचार)
15.25 घण्टा: संदिग्धको एक मित्र उसलाई च्याट मार्फत सोध्छ: 'कहां?'
15.37 घण्टा: प्रेमिकाले शंकालाई च्याटमार्फत सोध्छन्: 'कस?'
15.53 घण्टा। संदिग्ध सावनाह इन्ट्याग्राम मा एक इरादा संग एक संदेश पठाउँदछ जो बस ड्राइव नहीं गर्दछ।
16.11 घण्टा: संदिग्ध सोध्छ कि उसलाई कसले बोलाउन सक्छ, किनकी उसले सबै दिन ऊब्यो।
16.26 घण्टा: संदिग्ध साथी र उत्तरसँग कुराकानी गर्नुहोस्: 'Amersfoort'।
16.33 घण्टा: संदिग्ध एम्मरफोर्टको स्टेशनन्सिनिनमा ट्रांसमीटर स्वामी को माध्यम ले आफ्नो फोन मा इंटरनेट को उपयोग गर्दछ।
18.00 घण्टाको बारेमा: सावन्ना घर आउँदैन। उनले घर 'खानाको लागि' गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए।
19.30 घण्टाको बारेमा: एक passerby एक काले महिलाहरु बाइक, ब्रान्ड Cortina, हगलल्याण्ड मा Weteringstraat मा Monsignor मा सडक को किनारा मा पहिया को सामने एक कालो केट संग। अनुसन्धानले देखाउँछ यो सभाना बाइक हो.
19.35 घण्टा: साथीले संदिग्धलाई सोध्छिन् च्याटमार्फत के उनले सनानामा गरे। संदिग्ध जवाफ दिन्छ कि उनी स्काइपमा यो कुरा गर्न चाहन्छन्।
20.03 घण्टा: संदिग्ध Google को माध्यम ले 'स्पाइस खोलने को समय den bosch' मा खोज को माध्यम ले आफ्नो फोन मा।
21.00 घण्टाको बारेमा: सविनालाई आमाले आफ्नी छोरीलाई प्रहरीबाट छुटेको छु।
21.43 घण्टा: संदिग्ध पाठको साथ पाठ सन्देश प्राप्त गर्दछ: 'तपाईंको इन्स्टाग्राम खाताको साथ 921 354' प्रमाणित गर्नुहोस्।
22.09 घण्टा: सावनाहको साथी Savannah's Instagram खातामा सावनाह मित्रले लगाउँछन्। उनले पाठको साथ साथीलाई सन्देश पठाउँछन्: 'म हुँ [...] अब'।
23.20 घण्टा: सावनाहको आमा फेसबुकमा सन्देश पोस्ट गर्नुहोस्। तिनी यस्तो लेख्छन्: "आज हाम्रो दिउँसो 15.00 घण्टा पछि हाम्रो छोरीलाई कसले देख्यो? त्यस क्षणबाट उनको मोबाइल बाहिर छ र हामीले तिनबाट केही कुरा सुनेको छैनौं। हामी धेरै चिन्तित छौं। के तपाई यो सन्देश साझा गर्न चाहानुहुन्छ? "
शुक्रबार2जून
12.00 - 12.30 घण्टा: संदिग्ध Oisterwijk मा एक मित्र संग सहमत छ। त्यो नियुक्तिको समयमा प्रहरीद्वारा बोलाइन्छ र भन्छ कि उसले एक हप्ता वा दुई वा तीनको लागि सावानालाई बोलाइएको छैन।
बिहान र दिउँसो: सविनाको आमाबाट कल ठूलो मात्रामा फेसबुकमा साझा गरिएको छ।
17.00 घण्टा: त्यहाँ एक हुनेछ केटीको शरीर भेटियो Achterveld मा एक खाडी मा। यो सावनाह हुन नसक्ने, तर रोमी Nieuwburg बाट.
शनिबार3जून
बिहान: सातानको दादी RTV Utrecht को भावनात्मक अपील गर्दछ"हनी, मलाई एक कृपा गर्नुहोस् र घर आउनुहोस्। मलाई तपाईबाट सुन्नुहोस्! "
20.32 घण्टा: प्रहरीले जब संदिग्ध मित्रलाई बोलाउनेछ। उनी उनलाई पुलिसलाई झुक्याउन र उनीहरूको साथ हराएको बारे कसको बारेमा झूट बोल्छन्।
आइतबार4जुन
09.00 घण्टा: 700 स्वयंसेवकहरू खोज सुरु गर्नुहोस् सावन को।
11.38 घण्टाको बारेमा: पुलिस एक सूचना प्राप्त छ कि त्यहाँ छ डे डेनकेल्स नजिकैको शरीर भेटियो बन्नुचोटन मा। शरीर एक खाईमा छ, आंशिक रूपले उफ्र्यो। यो एक व्यक्ति द्वारा पाएको थियो जुन आफ्नो कुकुर निकासको नजिकै छ।
शरीर को खोज पछि, पुलिस औद्योगिक क्षेत्र डी क्रोनकेल्स मा अनुसन्धान गर्छन। (फोटो: एपीआई)
19.34 घण्टा: संदिग्ध फेसबुकमा एक सन्देश दिन्छन्: 'मसँग कसलाई विदेशमा टी ड्राइभर जान्दछु ??? धन्यवाद पहिले नै!
20.42 घण्टा: प्रहरीले जब संदिग्ध मित्रलाई बोलाउनेछ। उनी भन्छिन् तिमी हो विदेशमा चिन्ता पर्दैन.
23: 20 घण्टा: प्रहरीले बताउँछ सवाना को शरीर भेटिन्छ। उनी मान्छन् कि 'सावनाह अपराधद्वारा मारेका थिए'।
सोमबार5जून
01.02 घण्टा: De संदिग्ध पक्राउ छडेन Bosch मा घर मा। उनको शयन कक्षमा प्रहरीले सान्नाहबाट चीजहरू समावेश गरेको ब्याकप्याक फेला पारेको छ। यसमा एक बैंक कार्ड, अर्ध-जलाएको पहिचान कार्ड, एक रबब्याक कार्ड र तीन कुञ्जीहरूसँग एक कुञ्जी रिंग समावेश गर्दछ, जसमा सावनाह साइकलबाट साइकल कुञ्जी पनि समावेश गर्दछ।
सार्वजनिक अभियुक्त सेवाले एक प्रतिक्रियामा यसो भने: "सार्वजनिक अभियोग सेवा अफगानिस्तानमा मृत्युको कारण बारे संवेदनशील जानकारी अनुसन्धानको यस चरणमा सार्वजनिक गरिन्छ। मृत्युको कारण सहित, अनुसन्धान, सडकमा मात्र एक महिना र अझै पूर्ण स्विंगमा छ। यद्यपि हामीले बुझ्न सक्छौं कि त्यहाँ धेरै प्रश्नहरू छन्, हामी अझै अनुसन्धानको रुचिमा उनीहरूलाई जवाफ दिन सक्दैनौं। "
माथि उल्लिखित आधिकारिक व्याख्यानले मकबरेको साथ फाल्दैछ! सुरू गर्नका लागि, सावनाह आमाले 21 मा: 00 मा पुलिसलाई हराएको रूपमा। आजको टेक्निकल स्रोतहरू, जुन हामी वर्षौंका साथ टाढािएको छ, यो स्पष्ट हुनु पर्छ सबैजना सधैँ र हरेक ठाँउ पुरा तरिकाले अनुगमन गरिन्छ। यसको अर्थ प्रत्येक स्मार्टफोनले सटीक ट्रेससेबल ट्र्याक छोड्दछ। यदि तपाईंले एक CSI श्रृंखला वा अन्य पुलिस श्रृंखला हेर्नुभयो भने, तपाईं यो प्रविधि मात्र अवस्थित छैन भनेर थाहा छ, तर पेश गरिएको छ कि कानुनको बारेमा सबै मिडिया स्टेटसहरूको माध्यमबाट, यो यो प्रविधि पनि लागू हुनेछ भनेर पक्का हुन सक्छ। सावनाह र आरोपित अपराधी दुवैको मोबाइल फोन तुरुन्तै पत्ता लगाउन सकिन्छ। आपराधिक अनुसन्धान विभाग पनि तुरुन्तै हेर्न सकिन्छ कि दुई सम्पर्कमा छन् र दुई स्मार्टफोन्सहरू बीचको सम्पर्क सर्वेक्षण इतिहास मार्फत तुरून्तै स्थापना गर्न सकिन्छ। पुलिस दुई फोनहरू तुरून्तै अलार्म गर्नु पर्छ जुन सटीक उस्तै स्थानमा थिए। प्रहरीले दुई को सही ट्रयाक पनि हेर्न सक्षम हुनु पर्छ। त्यो सूचनाले तुरुन्त संदिग्ध अपराधीलाई संदेह गरेको हुनुपर्छ। तपाईंले यसो भन्न सक्नुभयो: "हो, तर सावाना मात्र हराइरहेको थियो र हत्या भएको थिएन, त्यसैले पुलिस अझै तीव्र थिएनन्"त्यसपछि त्यसोभए तिनीहरूले (कथा अनुसार) निम्न शपलाई संदिग्धसँग बोल्छन्? तिनीहरूले किन सबैलाई कल गरे? यो टेलीफोन ट्र्याकबाट स्पष्ट रूपमा पढ्न योग्य हुनुपर्छ कि दुवै एकै समयमा एउटै ठाउँमा थिए र त्यसैले तुरुन्तै केटा सुन्न को लागी गिरफ्तार गर्नुपर्छ। त्यो पनि होइन।
माथिको टाइमलाइनले छाप दिन्छ कि पुलिस र न्यायपालिकाको मात्र अन्तिम शताब्दीको 80 बाट टेक्नोलोजी छ। त्यो चिसो छ। सबैजना सबै डेटा आजकल भण्डारण गरिएको छ। तपाईं तिनीहरूलाई सोशल मिडिया कम्पनीहरू र गुगल (वास्तविक समय) को सर्वरमा पनि खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। "तर सायद संदिग्ध वा सावनाहले स्थान डेटा बन्द गरेको थियो!"के तपाईं गम्भीरतासाथ सोच्नुहुन्छ कि अझै पनि समस्या छ? जस्तै नै ट्रांसमीटर मार्फत जडान भएको छ, तपाईंको स्थान ठीक देखि गेज गरिएको हुन सक्छ; तापनि तपाईंले आफ्नो फोन बन्द गर्नुभयो। 2016 मा, मंत्री आर्डन वान डेर स्टेएरेले पहिले नै कानुनीकरणलाई कार्यान्वयन गरे जुन यो गरे गेजले सम्भव बनायो। हामी कहिले सम्म मूर्ख हुनु पर्छ? प्रहरी र न्याय कुनै पनि समयमा कुनै पनि ट्रेस गर्न सक्छ, तर यो सनना भेट्टाउन सम्म आइतवार बिहान सम्म लागेन? तिनीहरूले शुक्रबार देखि स्निफफर कुत्तों र हेलीकाप्टरहरू (FLIR क्यामेराको साथ) खोज्न र केही पत्ता लगाउन मौका पाउँदैनन्? सावनाह वैसे पनि हराइरहेको थियो, र त्यहाँ पनि अर्को हत्या (रोमीमा प्रतिबद्ध) त्यही क्षेत्रमा थियो; यसले तिनीहरूलाई थप अलर्ट र तुरुन्तै सक्रिय गर्नुपर्छ?
र त्यसपछि उल्लेखनीय कथा छ कि संदिग्ध विचारधाराले फेसबुकमा सन्देश पोस्ट गरे जुन सोध्छ कि उनी विदेशमा लिन सक्थे। उसले मित्रलाई पनि बुझेको थियो र भन्यो कि तपाई विदेशमा केहि चिन्ता गर्नुपर्दैन। केटाले शुक्रबारदेखि जान्छिन् (मञ्चमा कथा अनुसार) कि उनी पुलिसको खोजीमा छन्, तर केवल अब विदेश जाने तयारी गर्नेछ (र फेसबुकमा राख्नुहोस्)? स्मार्ट अतिथि! अनि निश्चय नै उनले एक सशस्त्र निर्णय पनि गरेका थिए जुन सनाह (वंशवाद) को लागी सामानको सामान र सावनाहबाट साइकल कुञ्जी लिएर घर फर्कन छोड्नु पर्दैन। आह, केटालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा जाँच गरिनेछ र एक उच्च उच्च IQ साबित गर्न साबित हुनेछ। यस स्पिन भएका मिडिया कलेजको कुनै अशांति छैन।
पहिले मैले लेखेको थिएँ कि त्यहाँ राम्रो तरिकाले एक मनोवैज्ञानिक स्पिन हुन सक्छ, बनाएको हत्या र बनाएको हत्यारा हत्याराहरू। त्यो बारेमा मेरो विचारहरू पढ्नुहोस् यो लेख en यो लेख (यहाँ हेर्नुहोस् सबै लेखहरू)। कुन उद्देश्यको साथ? त्यस सन्दर्भमा तपाई सोच्नुको सोच्नु पर्छ Niccolo Machiavelli बुझ्न र थाहा छ कि पछि नाम एक महत्वपूर्ण मिडिया पुरस्कार छ। Machiavelli प्रचार गरे कि तपाईं आजीवन मा एक फायर पकड़ को लागि दुरुपयोग र छल को उपयोग गर्न सक्छन्। हामी अधिकतम भन्दा मुल्य खेलाडी छौं समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान? तपाईले एक समस्याको अवस्था सिर्जना गर्नुहोला, जनसंख्या बीचको निश्चित प्रतिक्रिया प्रदान गर्नुहोस् र त्यसपछि एउटा प्रस्ताव प्रदान गर्नुहोस् जसले तपाइँलाई अधिक शक्ति दिन्छ र जनसंख्यामाथि नियन्त्रण गर्दछ। यस अवस्थामा, यो बारेमा हुन सक्छ, उदाहरणका लागि, कुनै पनि स्पष्ट संकेत बिना अवलोकनका लागि कम उमेरका बालबालिकालाई रोक्न कानूनमा काम गर्दै। मंत्री एडिथ शिपर्सले एक पटक गरे एक बिल त्यस दिशामा यो वयस्कहरूमा आए। यो देखिन्छ कि जनसंख्याको मानसिकता त्यस दिशामा धकेल्न सकिन्छ। यो (सम्भव) मनोविज्ञान पनि एक राष्ट्रीय डीएनए डाटाबेसको लागि इच्छा मा योगदान गर्नेछ। हामी पर्खिरहेका छौं कि मिडियाहरूले पीडितहरुलाई भेट्टाउन डीएनए प्रमाणको कथा संग चाँडै आउनेछन्। यो फेरि तपाईं कुन प्रमाणको बारेमा एक कथा बन्नुहुनेछ र म प्रमाण कहिल्यै सामना गर्नेछु। केस बन्द त्यहाँ पनि वास्तविक समय मा हेर्न र सोशल मिडिया सञ्चारमा हस्तक्षेप गर्न थप कानूनको लागि थप अलबाबी पनि छ।
जब सम्म हामी हाम्रो आँखाहरु मीडिया कहानियों संग बंद र गहन सबूत बिना प्रमाण को बारे मा कहानियां बंद राखन को लागि, Machiavelli मूल्य को भुगतान जारी रहेगा। र यदि तपाईं प्रमाण देख्नुहुन्छ भने, प्रश्न यो छ कि यो जीवित मनोविज्ञान जिन्दगी राख्न निर्माण गरिएको प्रमाण छैन। मेरो फेसबुक टाइमलाइनमा 1 जुनमा पोस्ट गरिएको यो मामलाको बारेमा मेरो विचारहरू 15x तल। यदि तपाईलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना हामी मनोवैज्ञानिक संग काम गर्दैछौं र सम्भावना र अपराधीहरू दुवै भूमिका खेल्छ भन्ने सम्भावना छ, त्यसोभए तपाइँ प्रत्येक परिदृश्यको रेकर्ड (पुनर्निर्माण) पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया ध्यान दिनुहोस्: यस्तो परिदृश्यमा, सविनाहको संदिग्ध संदिग्धको वकील (जेनिन प्रसारणमा देखाइएको) पनि खेल खेल्छ। इभा जेकिन्का बारेमा तर बोल्दैन।
कृपया मलाई मेरो विचार बोल्नको लागि क्षमा गर्नुहोस्, तर कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ कि यस अवस्थामा रोमी र सभाना मूर्ख भइरहेको छ। के भयो भने त्यहाँ कुनै मृत केटीहरू थिएनन्? मजाकहरू गोपनीयतामा घोरिएका थिए र क्यामेराहरू लामो दूरीमा राखिएका थिए। सविना डेकेकरका पिताले अर्कोलाई राखे राम्रो लुकेको मासु ग्रिल चलचित्र सविनाको विफलताको दिन।
यसले टाढाबाट हटाउन सक्छ; एकैछिनमा एकैछिनमा रमाईलो लागेकी थिईन र तपाईले यो कुरा निश्चित गर्न चाहनु भएको छ कि वेरि-वेग-गी-स्टेनका केटीहरु अर्को परिचयमा जान्छन् ... तर म आमाबाबुको अभिभावकसँग सहमत हुनुहुन्न। एक नक्कली आईडी कार्ड (वांछित उपनामका लागि) बनाइएको छ यस्तो होहक्स। रोमी को आमा मलाई उनको आफ्नै कार्ड कार्ड र रोमी को। त्यो त्यो दिन र अंतिम संस्कार पछि दिन किन गर्नेछ? उनले मलाई किन जवाफ दिन सक्थे? त्यो केटीहरू वास्तवमै अवस्थित थिए, मैले पहिले नै मेरो अघिल्लो पोष्टमा स्पष्ट गरेको छु।
मैले पनि अभियोगकर्ताको नाम प्राप्त गरे (रोमीको कथित हत्यारे)। म त्यो पनि केहि कुरा पत्ता लगाउन सक्दिन, र यदि म प्रश्न जारी राख्छु म अब केहि पनि सुन्न छैन।
तिनीहरूले किन त्यसो गर्नु पर्छ / केहि गर्न चाहानुहुन्छ? एक ठूलो सामाजिक प्रभाव र जनसंख्या मा अधिक नियन्त्रण संग ठूलो लक्ष्य प्राप्त गर्न को लागि, तपाईं निकोमो Machiavelli द्वारा 'एल प्रिन्सिप' पुस्तक को अनुसार, दुरुपयोग र धोखा संग मान्छे पकड सकते हो। अनि त्यस Machiavelli मा नेदरल्यान्डमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मिडिया पुरस्कार छ। एक पल्ट बेक वैटरले त्यो पुरस्कार जिते।
कथाहरू रहँदै। निम्न भिडियोमा तपाईंले एड्वेड स्नोडेनलाई एक क्षणको बारेमा के बुझ्न सक्नुहुनेछ जुन सेवाहरू सक्षम छन्। त्यो ज्ञानको ज्ञानमा तपाईंले सुरक्षित रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ कि उल्लिखित पुनर्निर्माण र परिभाषित टाइमलाइन धेरै अविश्वसनीय छ।
स्रोत लिङ्क सूची: rtl.nl, metronieuws.nl
Nieuwsuur 'तपाईंलाई अब सोशल मिडियामा कुनै पनि समाचार पढ्न छैन, यो तपाईंको लागि खराब छ'
ट्याग: एन्जेलो सोर्स Giroto, डिकर, विशेष, Jinek, हत्या, हत्यारे, हत्यारे, नाम, नेइभबर्ग, समाचार अन्तिम, Romy, RTL, साभान्नाह, टाइमलाइन, संदिग्ध, संदिग्ध
« 'Desinfo एजेन्टहरु र एलियंस' VERSUS 'दुनिया मा वास्तविक समस्याहरु लाई संकेत गर्छन र कार्रवाई मा आउछ'
हराएको किशोरका सदस्यहरु माइकल रैडिकेकर (एक्सएनएमएक्सएक्स) हे हेलेनन र क्रिस्टेल वान डेन बर्ग (एक्सएनएमएक्सएक्स) बाट वेल्डहाउसबाट »
कुल भ्रमण: 4.278.371
आरसीएस op पहिले नै युद्ध हराउनु भयो? वा हामी वास्तवमै उठेर कार्य गरिरहेका छौं?